Cuba: Madaxweynaha Itoobiya oo booqasho rasmi ah ku jooga Jasiiradda – Kasmo Newspaper
Cuba: Madaxweynaha Itoobiya oo booqasho rasmi ah ku jooga Jasiiradda
Updated - January 11, 2018 12:54 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Itoobiya, Mulatu Teshome Wirtu,ayaa Isniintii 8dii Jenaayo 2018 ku tagay dalka Cuba, booqasho manta oo Khamiis ah dhammaanaysa.
Waa booqashadii u horreysay oo rasmi ah, in kasta oo Teshome horey u tagay Havana, xilligii tacsidii Fidel Castro ee bishii Disembar 2016kii.
Maalintii Talaadada, 9kii Jenaayo,Teshome wuxuu booqday Taallada lagu xusuusto kaaderkii Caalamiga ahaa ee Cuba, xabaalaha lagu magacaabo Christopher Columbus Cemetery ee Havana, halkaas oo uu ubax dhigay, si loo xusuusto ciidammadii Cuba ee naftooda u huray Itoobiya dagaalladii 1977.
Teshome wuxuu xusay deeqsinimadii kumanaan reer Cuba ah oo kaalintoodii muhiim u ahayd sidii Qaaradda looga xoreyn lahaa gumaysiga, midabtakoorka iyo Apartheid (caddaankii tirada yaraa ee Koofur Afrika). Wuxuu si gaar ah hoosta uga xarriiqay ahmiyaddii tillaabadii Cuba u lahayd ilaalinta midnimada dhuleed (Territorial Integrity) ee Itoobiya.
Cuba, iyada oo military ahaan ugu hawlanayd dagaalkii Koofur Afrika ee Angola, waxay sannadkii 1977 ciidammo lixaad leh u soo dirtay Itoobiya, si ay uga difaacaan Soomaaliya. Xilligaas waxaa socday dagaalka loo yaqaanno ‘Ogaden War’, ciidammada Jasiiradduna waxay sii joogeen Itoobiya ilaa dhammaadkii 1988kii.
Fidel Castro waligiis waa inkiri jiray, isla xilligaas, in ciidammo ka socda Cuba lug ku leeyihiin cadaadiskii xorriyad-doonkii Eritrea. Cuba iyo Itoobiya waxay lahaayeen xiriir dhow oo soo bilowday xilligii rejiimkii Mingistu Xayle Maryam ee 1974kii, ha yeeshee iska qaboobay 1991kii, markii xukunka laga tuuray Mingistu.
Laakiin iskaashiga dhinacyada beeraha iyo caafimaadka ee 2da dal ayaa halkiisii ka sii socday, sannadadii dambana waxaa dib u bilowday xiriirkii Jaamacadaha, waana badanyihiin ardayda Itoobiya ee wax ka barata Cuba, gaar ahaan Kulliyadda Caafimaadka.